पर्यटकहरु ठगिने क्रम विमानस्थलबाटै सुरु हुन्छ
प्रकाशित मिति: 2015/08/19
कमल रिमाल, कोषाध्यक्ष, पर्यटन सेवा संघ
वि.सं. २०४६ सालमा धादिङ जिल्लाको सल्यानकोट गाविसमा जन्मिनुभएका कमल रिमालले छोटो समयमै आफूलाई पर्यटन क्षेत्रमा स्थापित गर्न सफल हुनुभएको छ । हाल पर्यटन सेवा संघको कोषाध्यक्ष रहनुभएका रिमालसँग सम्बन्धित रहेर तयार पारिएको सामग्री यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
कमल रिमाल बुबा ओमनाथ रिमाल र आमा लिलाकुमारी रिमालको कोखबाट एक निम्नवर्गीय किसान परिवारमा जन्मिनु भएको हो । धादिङकै नेत्रावती प्राथमिक विद्यालयबाट तीन कक्षासम्मको अध्ययन गर्नुभएका रिमालले श्री कार्की गाउँ माध्यमिक विद्यालयबाट माध्यामिक तहको अध्ययन पूरा गर्नुभयो । एसएलसी उत्तिर्ण गरेपश्चात उहाँ राजधानी काठमाडौँ छिरेर पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नुभएको हो ।
वि.सं. २०६१ सालमा राजधानी छिर्नुभएका रिमाल अध्ययनको शिलशिलामा सरस्वती क्याम्पसमा भर्ना हुनुभएको थियो । उक्त क्याम्पसबाट प्रमाणपत्र तहसम्मको अध्ययन र पब्लिक युथ क्याम्पसबाट स्नातक तहसम्मको अध्ययन उहाँले पूरा गर्नुभयो ।
पर्यटन क्षेत्रमा रिमालको आगमन भने वि.सं. २०६५ सालमा मात्र भएको हो । एक जना आाफन्तको सहयोगमा इन्काउन्टर नेपाल नामक एक टे«किङ कम्पनीबाट पर्यटन यात्रा सुरु गर्नुभएका रिमालले इन्काउन्टर नेपालमा दुई वर्ष काम गरेको पछि केही साथीहरुसँग मिलेर हिमालयन स्पिड एडभेन्चर टे«क्स नामक कम्पनी स्थापना गर्नुभयो । विगत तीन वर्षदेखि उहाँले होटल नेपालय पनि सञ्चालनमा गरिरहनुभएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा रिमालको आगमन एउटा संयोगको रुपमा मात्र भएको थियो । ‘अवसरको खोजीको शिलशिलामा म पर्यटन क्षेत्रमा आएको थिएँ’ रिमाल भन्नुहुन्छ, ‘साथीहरु ट्रेकिङ गएर घुमेर पैसा कमाएर फर्केको देख्दा मलाई पनि रहर लाग्थ्यो, यसैको प्रेरणाले म पर्यटन क्षेत्रमा आएँ ।’
‘प्रविधिमा मेरो राम्रो ज्ञान छ’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रविधिको उपयोग गरेर पर्यटक आगमन बढाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा मैले कोर्ष नै गरेको थिएँ । यसले गर्दा पनि कम्पनी चलाउन मलाई कम्पनी चलाउन खासै सकस भएन ।’
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सन्दर्भमा अनेकौँ अप्ठ्याराहरुको रिमाल पनि भुत्तभोगी हुनुहुन्छ । नेपाल प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक रुपमा निकै धनी भए पनि यिनको सदुपयोग गर्न नसक्दा हाम्रो पर्यटन पछि परेको भनाइ उहाँको छ । ‘हामीसँग प्रचुर सम्भावनाहरु भए पनि तिनको सम्भाव्यताको अनुपातमा उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ’ उहाँ भन्नुहुन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक ठूलो रोग रहेको उहाँको ठम्याई छ । ‘हामीसँग झण्डै दुइ हजार ट्रेकिङ कम्पनीहरु छन्, तर कम्पनी नखोलिकन वेवसाईट बनाएर पर्यटन चलाउनेहरु अनगिन्ती छन्’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसका कारण पनि प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन त छँदैछ यसबाहेक कर संकलनमा पनि गिरावट आएको छ ।’ रिमालका अनुसार अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न सकियोमात्रै भने पनि पर्यटन क्षेत्र शुद्ध बन्न सक्छ ।
यसबाहेक नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण समस्या नीति निर्माण तहमा रहेको उहाँको ठहर छ । सरकारले भरपर्दो रुपमा अध्ययन/अनुसन्धान गरेर नयाँ गन्तब्यको खोजी र प्रचारप्रसार गर्न नसकेको प्रति उनको आपत्ति छ । त्यस्तै कुनै पनि पर्यटक नेपाल आउँदा विमानस्थलदेखि नै ठगिने क्रम सुरु हुने रिमाल बताउनु हुन्छ । यसका लागि सरकारले कडा नियम ल्याएर नियमन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । ‘सरकारको नीति यति फितलो छ की कुनै पनि अप्रिय घटना घटिहाल्यो भने त्यसको तत्कालिन उद्दार गर्न सरकार असमर्थ छ’ भन्नुहुन्छ, ‘यस्ता दृष्टान्तहरु प्रशस्तै छन्, सरकारले यसमा यथासिघ्र सुधार गर्नुपर्छ ।’ प्रस्तुत छ, उनै रिजालसँग गरिएको कुराकानीः
नेपालको वर्तमान पर्यटकीय धरातल बारे तपाईको बुझाई के छ ?
अनावश्यक र अतिरञ्जित प्रचारकाबीच नेपालको पर्यटन क्षेत्र अहिले सुस्ताएको छ । हामीले आंशिक क्षति व्यहोरेको हो, तर प्रचार यसरी गरिएको छ मानौँ हामीसँग केही पनि बाँकी छैन । यहि कम यथार्थ बेसी गलत प्रचारको विचमा नेपालको पर्यटन अल्झिएको छ । अब हामीले सकारात्मक प्रचारलाई तिव्र बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
तपाईले गलत प्रचारको कुरा गर्नुभयो तर यसमा त पर्यटकीय संस्था र व्यवसायी नै अगाडि छैनन् ?
यो कुरालाई म पनि स्वीकार्छु । पर्यटन व्यवसायीहरले नाजुक अवस्था देखाएर सहयोगको याचना गरेको पनि देखियो, पर्यटकहरुसँग । तर, हाम्रो पर्यटन क्षेत्र त्यति धेरै क्षतिग्रस्त छैन । एकदुईवटा पर्यटन पदमार्ग, केही सांस्कृतिक सम्पदाहरलाई छाडेर अन्नपूर्ण, सगरमाथालगायत अधिकांश सांस्कृतिक सम्पदाहरु पनि ज्यूँका त्यूँ छन् । यसको सही सन्देश हामीले प्रचार गर्नु जरुरी छ ।
त्यसो भए पर्यटकहरु नेपाल आउन कुनै पनि समस्या छैन ?
नेपाल आउन चाहने पर्यटकलाई यहाँ कुनै पनि समस्या म देख्दिनँ । मैले अघि नै भनिसकेँ हाम्रा अधिकांश सम्पदा, पर्यटन रुट सबै सुरक्षित छन् विस्तारै त्रास र जोखिमको अवस्था पनि कम हुँदै गएको छ । हामी पर्यटन व्यवसायीहरु पनि सेवा प्रदान गर्न तयार छौँ । पर्यटक आउन समस्या छैन ।
तपाईले यसो भनिरहँदा हाम्रा पूर्वाधारहरु पुनर्निर्माण भइसकेका छैनन्, यसबाहेक सेवाका मामिलामा पनि पर्यटकहरु ठगिने क्रममा न्यूनीकरण भएको छैन नि ?
हो पर्यटकहरु ठगिनै रहेका छन् । उनिहरु ठगिने क्रम विमानस्थलबाट सुरु हुन्छ, यो कुरा म स्वयंले अनुभव गरेको छु । तर, हाम्रो पर्यटन सेवा संघले विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुलाई नक्सा दिएर, भाषिक समस्यालगायत ठगिने सम्भावित ठाउँ र परिस्थितिको समाधानार्थ स्वयंसेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ । यी कुराहरु हामीले पहिल्यैदेखि ध्यान दिँदै आएका छौँ ।
खासगरी पर्यटकहरु कहाँ–कहाँ ठगिँदा रहेछन् ?
कतिपय केसमा विमानस्थलमै सामानहरु हराईरहेको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा सामानहरु समयमै आईनपुग्दा पर्यटकहरुका योजना विथोलिएका हुन्छन् । त्यस्तै विमानस्थलमा पर्यटकहरुलाई दूव्र्यवहार गर्ने, यातायातमा ठग्नेलगायतका समस्याहरु छन् । पर्यटकहरुलाई सेवा गर्ने नामामा यस्ता नराम्रा गतिविधिहरु भएका छन, यसबाहेक अन्त सेवाका मामिलामा त्यति धेरै समस्या देखिँदैन । यी कुराहरुको समाधान गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकायहरुले यी कुराहरमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसबारेमा हामीले कुरा राख्दै पनि आएका छौँ ।
तपाई पर्यटक सेवा संघको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि संस्थागत योजना के के छन् ?
विगतका राम्रा कार्यक्रमहरुको साथमा नयाँ कार्यक्रमहरुलाई हामीले प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ । यस क्रममा हामीले टान र पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरेर त्रिभूवन विमानस्थलदेखि पशूपतिसम्म र अन्य विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरुमा सरसफाईका कार्यक्रम बनाएका छौँ, हाम्रो कार्यसमितिको बैठकले यसलाई अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै रक्तदानका कार्यक्रमहरु हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ ।
तपाईंहरु स्पष्ट कार्यक्रम बनाउनुहुन्न कि त बनाएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्नुहुन्न, यो संघमा कत्तिको लागू हुन्छ ?
पर्यटन सेवा संघमा यो कुरा लागू हुने अवस्था छैन । कीनकी हामीले विमानस्थलमै स्वयंशेवा काउन्टर राखेर पर्यटकहरुलाई सही गन्तब्यमा पु¥याउने प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दै आएका छौँ ।
प्रचारप्रसार गरेरमात्र हुन्न सेवा पनि दिनुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ । त्यस्तै नेपालमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा कामहरु भएका छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहर भएका छैनन् यसमा पनि काम गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो तर्फबाट कामहरु गरिरहेका छौँ, तर सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।